Indlela Phathani Ukuze Isitimela Trip Across Italy | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Indlela Phathani Ukuze Isitimela Trip Across Italy
(Kugcine ukubuyekezwa On: 27/12/2019)
Zizwe ukhululekile, bheka zikanokusho akudingeki umthwalo kakhulu esindayo. Nakhu ukuthi Pack uhambo isitimela yonkana Italy.
Indlela Pack isitimela – nezingubo, izicathulo, nezinsiza
Nini ehamba izitimela ngokusebenzisa Italy, ungafuna ukugcina fashion yakho umdlalo eqinile. Kodwa esikhundleni ukupakisha wonke izingubo zakho ozithandayo, ukukhetha anesitayela, kahle ukusika zabuna futhi accessorize ngesibindi isitatimende izingcezu. Ngokwesibonelo, Pack uhambo isitimela kahle zifakwa jeans black, T-shirts kanye polo izintamo bheka Chic wedwa. Ukuze uthole abayitoho usuku ukubukeka, bhanqa amateki nebhantshi jini. Ebusuku, engeza emafulethini letihlelekile naletingakahleleki ucezu isitatimende ubucwebe.
Qiniseka ukupakisha isikhafu enkulu. Kanye egqoke ngemfudumalo uma kubanda noma ukwengeza ukuhlukanisa ukuze ngubo, isikhafu enkulu ingaba njengesihluthulelo ingubo ngenkathi uphumule yakho ngesitimela. Ungasebenzisa ngisho ke njengoba ingubo epikinikini noma lesikhashana lolwandle ithawula.
Uma kuziwa izikhwama, ukuletha isikhwama esisodwa esikhulu ehlombe ezingaba ubamba yezitolo noma lolwandle essentials. Uzodinga ubhaka noma cross-body isikhwama kwansuku usuku imisebenzi izivakashi kanye nelincane, bamba okuhlelekileko kusihlwa, ngakho-ke ezilungile uma Pack uhambo isitimela.
nokugeza, imikhiqizo ubuhle, nemithi
Ukuze izitimela uhambo, kuyakufanelekela ukuthenga travel obujwayelekile okupakisha for uhambo isitimela yonke imikhiqizo yakho ubuhle noma esitsheni travel setha ungagcwalisa imikhiqizo yakho siqu. Uma uhambo lwakho lungaphezu ukuhlala isonto noma amabili, cabanga ukuthenga imoto kakhudlwana futhi gel eshaweni phakathi kohambo lwakho, kunokuba asilethele esitsheni elisemhlanganweni egcwele esikhwameni sakho – unezela isisindo futhi ukuthatha isikhala. Ungase futhi ucele amasampula wendawo yakho ubuhle esiphikisayo. Ngokuvamile bakwazi ukukunikeza izinguqulo encane zonke izidingo zakho, efana Mascara, serum nobusuku ukhilimu.
Uma kuziwa makeup, asike isimiso sakho phansi yakho uhambo. A amafutha okuthambisa anombala, othi awube ukuthi ingashaya ngokuphindwe kabili njengoba eyeshadow futhi Mascara kuyokugcina selfie-ngomumo. Ungase futhi alethe kanye umkhiqizo multi-purpose efana ngovaselina noma amahora angu-ayisikhilimu, okungaba namafutha lip, a highlighter noma amafutha okuthambisa okukhulu.
Ungakhohlwa imithi yakho kadokotela, kanye ezincane kuqala zosizo. Painkillers, imithi nesicanucanu band izinsizi awazithathi isikhala esiningi, futhi uma nidinga noma yini olucacile, uzokwazi ukuyithola i-Italy ekhemisi noma izidakamizwa esitolo.
Ezokuzijabulisa, electronics, futhi imibhalo
A ujantshi uhambo kuyisikhathi ephelele ukubamba up on ekufundeni, Nokho, amabhuku kukhona besiyoba sikhulu futhi kube nzima. A kindle, ithebhulethi noma smartphone nge ukufundwa uhlelo lokusebenza yindlela enhle ukuba Thenga kakhulu ezincwadini esizifundayo kuyilapho ukugcina imithwalo ukukhanya kwakho ngakho-ke qiniseka ukuthi Pack isitimela akhubeke tablet yakho. Ungalanda futhi audiobooks futhi ujabulele ukubuka kusukela ewindini lakho kuyilapho ukulalela inoveli yakho.
Kanye nencwadi yakho kudingekile ngokomzimba travel, nawe kungathatha izithombe noma scan izincwadi ezibalulekile amakhophi nge-imeyili kuwe. Ngaleyondlela, uma smartphone noma ithebulethi yakho ayitholakali, ungangena imeyili yakho ukude futhi ukufinyelela imibhalo udinga.
Brussels ukuze Bonn Izitimela
E-Antwerp liye Bonn Izitimela
Halle ukuze Bonn Izitimela
YaseGhent ukuze Bonn Izitimela
Uma uthatha i uhambo ngobusuku obubodwa isitimela, uzodinga ukukhumbula Pack isitimela konke essentials zakho isikhwama esincane in ubhaka noma esikhwameni sakho cross-body. Faka zokugeza eziyisisekelo efana isixubho nokunamathisela, hairbrush noma ikamu, ebusweni Sula, futhi amafutha okuthambisa. Uma ungumsebenzisi olele ukukhanya, ungase ufune ukwengeza earplugs kanye buso ubuthongo esikhwameni sakho ngobusuku obubodwa.
Futhi uzodinga abanye amaphijama engasindi, noma uma uthanda, izingubo ukhululekile ungakwazi ukulala, efana ithrekhi ibhulukwe noma leggings futhi vest noma phezulu ithangi nge support ezifihliwe. Ungakhohlwa isikhafu sakho esikhulu, okuyinto ungakwazi Roll up bese usebenzisa njengoba umcamelo noma ingubo esengeziwe.
Ukulungele Pack uhambo isitimela noma ukubhuka uhambo lwakho isitimela emhlabeni Italy? Qiniseka ukuthi uvakashele Londoloza Isitimela website lendawo izitimela amathikithi yokubhuka travel European at the best amanani. Thola ukuhlola!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-pack-for-a-train-trip-across-italy/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / pl ukuba / fr noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
#pack amathiphu isitimela traveltips
Ama-Movie Kuhle Okufakiwe Izitimela